Kaviri Convex Lens, Optical Lensing, Optics Lens Mugadziri muChina
Tsanangudzo:Kaviri Convex Lens,Optical Lensing,Lens yemaziso,Optics maikorosikopu,,
 HomeProductsIdenderedzwa LensKaviri Convex Lens
Kaviri Convex Lens (Total 5 Products)
Zvigadzirwa zve Kaviri Convex Lens , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Kaviri Convex Lens , Optical Lensing vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Lens yemaziso R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Isina kufukidzwa Fused Silica kaviri convex lens
12mm Dhayamita Optical Fused Silica Double Convex Lens
Optical girazi N-SF1 kaviri convex lens
Biconvex Lenses inogadzirwa neyakafanana convex pamusoro pamativi ese lens. Iyi mhando yemalensi ine yakanaka yakatarisa kureba uye inogadzira ese ari maviri uye vitrual mifananidzo. Magadzirirwo: Mashoko: Yakabatanidzwa Silica Dhayamita: 1mm ~...
Biconvex Lenses inogadzirwa neyakafanana convex pamusoro pamativi ese lens. Iyi mhando yemalensi ine yakanaka yakatarisa kureba uye inogadzira ese ari maviri uye vitrual mifananidzo. Magadzirirwo: Mashoko: Yakabatanidzwa Silica Dhayamita: 12mm Focal...
Biconvex Lenses inogadzirwa neyakafanana convex pamusoro pamativi ese lens. Iyi mhando yemalensi ine yakanaka yakatarisa kureba uye inogadzira ese ari maviri uye vitrual mifananidzo. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Dhayamita: 1mm ~ 300mm Focal Legnth...
Biconvex Lenses inogadzirwa neyakafanana convex pamusoro pamativi ese lens. Iyi mhando yemalensi ine yakanaka yakatarisa kureba uye inogadzira ese ari maviri uye vitrual mifananidzo. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-SF1 Dhayamita: 1mm ~ 300mm Focal Legnth...
China Kaviri Convex Lens Vatengi
Biconvex lenses ndeyakareruka lens inosanganisira mbiri dzakaumbika idenderedzwa, kazhinji iine yakafanana radius yekukombama. Kuve iri mhando yeakareruka lenzi, iyo biconvex lens ine akasiyana siyana ekushandisa kwayo, asi haina kuganhurirwa, kudzora uye kutarisa kwemalaser matanda, mhando yemifananidzo uyezve mamwe marudzi ezviridzwa zvemaziso.
Mune lens biconvex kana Plano-convex lens, denderedzwa rakaenzana kana rakaringana rakajeka rechiedza rinopfuura nepakati pe lens uye rinotendeuka panzvimbo kana kutarisa kunouya kuseri kwe lens. Mumamiriro ezvinhu akadaro, lens iyi inozivikanwa sekutendeuka kana yakanaka lens. Iyo daro rinouya kubva kune lens kumusoro kune iyo nzvimbo inonzi iyo yakatarisa kureba kweiyo lens. Sezvo paine kukombama pamativi ese e lens, pachave nenzvimbo dzakatenderedza mbiri pamwe nenzvimbo mbiri. Mutsara unodhonzwa nepakati peiyo biconvex lens inozivikanwa senge huru axis.
Biconvex Lenses- Zvishandiso & Zvishandiso
Aya malenzi ane akakomberedza kuwanda kwekushandisa ayo mamwe acho akanyorwa pazasi-
Biconvex lens inoshandiswa sekukudza kana kudzora lenzi.
Ivo zvakare anoshandiswa sezvinangwa kana zvinokudza
Izvi zvinoshandiswa mumasisitimu mazhinji ekufungidzira akadai seteresikopu, monocular, maikorosikopu, maboniboni, makamera, maprojekita, nezvimwe.
Izvi zvinoshandiswa mukugadzira iwo chaiwo mufananidzo kana ziso revanhu uye mufananidzo chaiwo kuitira mafirimu emifananidzo kana sensor yemaziso
Aya malenzi anoshandiswa zvakare segirazi rinopisa.
Aya anoshandiswa mukushandisa kwemifananidzo inodzosera uye zvakare mune akasiyana marudzi emaindasitiri
Nekudaro, iyo biconvex lens ndeimwe yemalensi akanakisa ayo anogona kushandiswa mune mamiriro apo danda rechiitiko chechiedza pane lenzi riri kutsauka muchimiro uye zvakare iro danda rinosiya malenzi anotendeuka achienderana.
Kaviri Convex Lens Optical Lensing Lens yemaziso Optics maikorosikopu Kaviri Convex Lenses